Xabbad joojin lagu wado in ay Suuriya ka dhacdo - BBC Somali
Xabbad joojin lagu wado in ay Suuriya ka dhacdo
Image caption Sawir hore oo Daraya laga qaaday
Xabbad joojin ay soo diyaariyeen Ruushka iyo Maraykanka ayaa lagu wadaa in ay dhaqan gasho galinka dambe ee maanta.
Waxaa la qorsheeyay in xabbad joojintaasi bilaabato 6:45 saacadda Geeska Afrika, laakiin waxaa muuqda astaamo muujinaya in xabbad joojintu ay dhibaato la kulmi doonto.
Tafaftiraha BBC-da ee arrimaha Bariga Dhexe wuxuu sheegayaa in qaar ka mid ah ciidammada la dagaalamaya Suuriya ay ka cago jiidayaan in ay ka goostaan kooxaha kale een heshiiska xabbad joojinta ku jirin.
Kooxahaas waxaa ka mid ah kuwa xiriirka la leh Al Qaacidda.
Jabhadda Islaamiga ah ee Axraar Al-Shaam oo ka mid ah malayshiyaadka Islaamiga ah ee ugu saamaynta badan ayaa gabi ahaanba diiday heshiiska xabbad joojinta.
Duqaymaha ay gaysanayaan diyaaradaha Suuriya iyo kuwa Ruushka ayaa Axaddii ka sii socday magaalooyinka Xalab iyo Idlib.
Dhanka kalana madaxwayne Bashaar Al Asad ayaa si naadir ah fagaare uga soo muuqday isaga oo salaadda ciidda jameeco kula tukaday Daraya oo ay horay ugu xoog badnaan jireen jabhadduhu balse ay ciidammada dawladdu la wareegeen bishii hore.